Qisada bilaawgii Fankii Khadiijo Daleys (AHUN | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta Qisada bilaawgii Fankii Khadiijo Daleys (AHUN
Qisada bilaawgii Fankii Khadiijo Daleys (AHUN
Qisada bilaawgii Fankii Khadiijo Daleys (AHUN)
Khadiija Cabdullaahi Camey gu’gii 1936 ayay ku dhalatay Magaalada Baydhabo.
Waxay aheyd gabadhii ugu horeysay ee ka heesta Raadiyow Muqdisho koofurta Soomaaliya sanadkii 1952. Sido kale waxay aheyd qofkii 21-aad ee loo diiwaan galiyo Kooxdii Radio Muqdisho intaan la aasaasin Kooxdii Waaberi. Halka Gaduudo-Carwo oo iyana bil kahor dhimatay(AHUN) ay ahayd Gabadhii ugu horeysay ee ka heesta Radio Hargeysa iyo gobolladda Waqooyi.
Labaddooda ayaa ugu horreeyay gabar raadiye kka heesta. Ka hor intaysan soo galin Saaxada Fankii Soomaaliyeed ee hilaadaa curdinka ahaa waxaa cod dumar riwaayadaha kaga heesi jiray Cumar Dhuulle Cali (AHUN).
Maalinkii ugu horreeyay ee Khadiija Cabdillaahi Camey Radio Muqdisho ka heesto aad bay dadkii ula fajaceen maaddaama ay arrin ugub ah ku noqotay gabar heesaysa oo waagaa dadku u heesteen adduun geddoon iyo dhaqanguur.
Deetana qaar kamida cullumadii masaajidda iyo dadkii magaaladda oodhan oo careysan ayaa isku gadaamey Xaruntii Radio Muqdisho iyo gurigii ay deganaayeen qoyskii Khadiija Daleys. Markii aad loogu baqay Khadiija ayaa waalidkeed qol dambe ku qariyeen.
Cabdilaahi Camey (AHUN) oo ah Aabbihii dhalay daleys ayaa dadkii ku eedeeyeen inuu yahay nin dambiile ah oo gabadhiisa u oggolaaday inay heesto sidoo kale Cullumadii qaar ayaa arrinkii gaarsiyay heer ay diinta ka saaraan Khadiijo Daleys.
Waxaana hadalkaas aad uga xumaaday Khadiijo Aabbaheed oo markii hore qorshaynayay inuu Khadijo Daleys Dalka Masar waxbarasho ugu diro balse maalintaa markuu arkay gabadhiisii oo (gaal) lagu tilmaamay ayuu go’aansaday inuu Daleys garab istaago una fasaxay inay heesto. asagoo ku dooday in ay jiraan gabdho muslimiin ah oo heesa sida fanaanaddii caanka aheyd xilligaas ee reer Masar Umu Kaltuun.
Markii Khadiija Daleys sidaa fankii ku gashay ayaa waxaa bilaawday in gabdho badan oo fanka jeclaa ku soo dhiiradaan oo fanka soo galaan. Xareedo-Duniya ayaa noqotay fananaanadii labaad ee Daleys kusoo xigsata kadibna Caasha Cabdow iyo qaaar kale baa ku soo xigsaday waxayna wehel iyo garab u noqdeen Khadiija Daleys oo awal kali aheyd.
Khadiija Daleys waxay aheyd heesaa iyo Hal-abuurad wax ku allifi jirtay Lahjada Maayga waxayna sameysat heeso badan oo ay ayadu qaaday. Fankeeda waxaa ku lammaanaa qiso jacayl oo soo martay suugaan badana ay ka sameysay.
Heesaha ay qaaday Khadija Daleys waxaa ugu caansan;
– Dadyow yaabayee, Caashaqu ma dabbaa?
-Hunu hunu hadal maahan Himbiriirsi arag maahan oo Abwaan Xasan Qawdhan lahaa.
Iyo qaar kaloo bada.
Allaha u naxariistee Khadiija Cabdillaahi Daleys waxay aheyd qof daljacaylka iyo wadaniyada ilaaheey jirkeeda ku beeray.
Hadaladdii u dambeeyay ee ay jeedisay waxay kaga hadashay sida ay dalkii ugu xiistay oo ay u rabi laheed inay mar uun ku laabato. “Waan duqoobay waxaan rabaa inaan ku nasto ciidaydii, waxaan u xiisay soortii iyo muufaddii ” iyo hadalo kale oo qiira leh balse geerida ayaa u diiday taas oo maanta ayay ku dhimatay Dalka Canada.
Innaalilaahi wa innaa ilahahi raajicuun.